Shiinaha Soosaaraha Mashiinka Nadiifinta Laser iyo Alaab-qeybiye | Zhancheng
★ Mashiinka wax lagu nadiifiyo ee Laser waa jiil cusub oo ah alaabada farsamada sare lagu daaweeyo dusha sare, cagaaran iyo bey'ada u fiican, sidaa darteed wasakhda dusha sare, miridhku ama dahaadhku wuu uumi baxa ama diirtaa, oo si wax ku ool ah ayuu u saaraa lifaaqyada dusha sare ama dusha sare ee shayga nadiifinta xawaare sare, si loo gaadho shayga nadiifinta sheyga Geedi socodka.
★Mashiinka nadiifinta laser-ka waa fududahay in la rakibo, la shaqeeyo oo la ogaado otomaatiga. Way fududahay in la shaqeeyo oo laga saari karo saliida xaydha, wasakhda, wasakhda, xabagta, miridhku, qurxinta, qurxinta, iyo rinjiga dusha sare ee walxaha.
★Waxay si sax ah u heli kartaa oo u nadiifin kartaa nadiifinta xiriirka, waxay ilaalin kartaa dusha sare ee walxaha jilicsan, waxayna si wax ku ool ah uga saari kartaa qaybaha wasakheynta heerka-yar; waa mid bey'adeed ku habboon oo aan u baahnayn isticmaal; tani macnaheedu maahan oo keliya in nadiifinta laser-ku ay waxtar leedahay, laakiin nidaamka nadiifintu waa mid deegaanka u habboon. Intaas waxaa sii dheer, ma adeegsanayso walxaha kiimikada lagu nadiifiyo, taas oo ka fogaanaysa waxyeelada ay u geysato maaddada ay keento daxalka kiimikada.
Qaabka mashiinka ZCFC 1000
Awooda leysarka 1000W
Heerkulka Biyaha 18-26℃
Heerkulka Shaqada 5-40℃
Ballaadhinta Baaxadda ≤80mm
Wadarta Awooda 14000W
Habka qaboojinta Qaboojinta biyaha
Nadiifinta laser-ka ayaa hadda si weyn loogu adeegsadaa warshadaha, waxaana inta badan loogu xagliyaa warshadaha sida caaryada, wax soo saarka baabuurta, soo celinta waxyaabaha soo jireenka ah ee dhaqanka, iyo dhismaha maraakiibta. Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay warshadaha, taas oo si wax ku ool ah u yareyn karta kharashka dayactirka shirkadaha isla markaana hagaajin kara saameynta nadiifinta warshadaha
Hore: Ku lifaaqan Mashiinka Calaamaynta Fiber Laser
Xiga: Duulista Fiber Laser Mashiinka Mashiinka